Xidiga kooxda Juventus Weston McKennie oo Rikoor u dhigay horyaalka seria A.
Home Horyaalka Italy Xidiga kooxda Juventus Weston McKennie oo Rikoor u dhigay horyaalka seria A.
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Weston Mckennie of Juventus in action during the Serie A match between Juventus and UC Sampdoria at Allianz Stadium on September 20, 2020 in Turin, Italy. Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
Kahor ciyaartii ay la ciyaareen Crotone, tababaraha kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa xaqiijiyay in Weston McKennie uu la dagaallamayay dhaawacyo fudud xilli ciyaareedkan, laakiin wuxuu ku jiraa xaalad uu ku sii ciyaaro kulanka Isniintii ‘Old Lady’ ay martigelisay Crotone ciyaarihii 23aad ee Serie A iyadoo xidiga caalamiga ah ee Mareykanka ayaa lagu soo daray bilowga shaxdii kulankaas.
Juventus ayaa 3-0 kaga adkaatay Crotone iyagoo labo gool ka heleen Cristiano Ronaldo iyo mid ka yimid uu saxiixay Weston McKennie Kani wuxuu ahaa goolkii afaraad ee Serie A ee 22 jirka 19 kulan u saftay xilli ciyaareedkan sidoo kale wuxuu siiyay labo caawin.
Goolkii Isniinta ee uu ka dhaliyay kooxda Crotone garoonka Juventus, McKennie wuxuu noqday Mareykankii goolasha ugu badan ka dhaliyay Serie A, isagoo ka sarre maray Michael Bradley kaasoo dhaliyay seddex gool intii uu joogay AS Roma.
Goolkiisii ugu horreeyay ee Talyaanigu ka dhaliyo waxay eheed 5tii Disembar kulan uu ka hor yimid Torino Ka dib waxaa uu goolal ka dhaliyey AC Milan oo markiisii seddexaad uu yimid iuo kulankii Bologna McKennie ayaa sidoo kale shabaqa ka soo taabtay UEFA Champions League kulankii ay 3-0 kaga badiyeen kooxda FC Barcelona ee ka dhacday Camp Nou.
Previous articleLiverpool oo u adeegsan doonta Takumi Minamino saxiixa Lucas Ocampos.
Next articleJeremy Mathieu oo kahadlay dhibaatadii uu kala barcelona iyo tan hada uu ku jiro Lenglet.